Falgalada Kiimikeed ee Sahlan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Falgal kiimikeedku waa cadaynta in uu dhacay isbadal kiimikeed. Alaabta bilowga ahi waxa ay isku badalayan alaabo cusub ama noocyo kiimikeed oo kale. Sidee u garan karnaa in uu dhacay falgal kiimikeed?
Hadii aan aragno mid ama in ka badan oo kuwan soosocda ah waxaa oran karnaa waxaa dhacay falgal kiimikeed:
In uu samaysmo ruushi ( in milanka ay kudhex samaysmaan adkayaal yaryar ah)
kulka oo isbadala
Waxaa jira falgalyo aad u tiro badan oo kala duwan, laakin guud ahaan waxa loo kala qaybiyey 5 qaybood oo sahlan.
Fagalka isku darka tooska ah:
Falgaklka iskudarka tooska ahi waa mid ka mida noocyada ugu waawayn ee falgalada kiimikeed, sida magaca aan ka dheehan karno falgalayaal fudud ayaa samayn kara maxsuulo badan. Qaabka aasaasiga ah ee falgalka kiimikeed ee tooska ahi waa:
A + B —>AB
Hadii aan tusaale usooqaadano samaysanka biyaha ay ka samaysmayaan curiyayaasha ay kakooban yihiin ee haydarojiin iyo oksiiin:
2H2 + O2 —>2H2O
Sidoo kale tusaale muhiim ah waxaa ah falgalka dhacaya marka dhirtu cuntadooda samaysanayaan, kaas oo dhirtu ay samaysanayso guluukoos iyo oksijiin kana samaysanayso ayadoo isticmaalaysa ilayska qoraxda, kaarboon labo oksaydh iyo biyo.
6CO2 + 6H2O —>C6H12O6 + 6O2
Falgalka kiimikeed ee kalabixinta ama kala soocida:
Falgalkan waxa uu lid ku yahay midkii hore ee aan kasoo hadalnay ee ahaa falgalka tooska ah. Noocan falgal kiimikeed, falgalayaasha waxaa loo kala saarayaa ama loo kala bixinayaa xubno yar yar. Qaabka aasaasiga ah ee falgalkani waa:
AB —> A+B
Hadaan tusaale fudud usoo qaadano kala jabinta curiyayaasha biyuhu ka kooban yihiin, waa falgal kiimikeedka kala saarida:
Sidoo kale waxaa tusaale usoo qaadan karnaa kala jabinta lithium carbonate oo loo kala jabinayo lithium oxide iyo carbon dioxide.
Li2CO3 —> Li2O +CO2
Falgalka kiimikeedka mid boos ka badalid:
Falgalkan hal curiye ayaa lagu badalayaa curiye kale oo kujira isku dhis. Qaabka aasaasiga ee falgalkani waa:
A + AB —>AC+ B
Falgalkan way fududahay in la isku habeeyo marka uu dhaco qaabkan soosocda:
Curiye + isku dhis —> isku dhis + curiye
Falgalka u dhaxeeeya curiyaha Zinc iyo isku dhiska haydarokaloorik asiidh waxa uu soosaarayaa haydarojiin neef ah iyo zinc koloraydh. Falgalkan waxa uu tusaale u yahay falgalka kiimikeed ee mid boos ka badalida.
Zn + 2HCl —> H2 + ZnCl2
Falgalka kiimikeed ee labo boos isku badalida
Falgalka labo boos isku badalidu waa sida midkii aan soo sheegnay oo kale ee ahaa falgalka mid boos iskubadalida, laakiin labo curiye ayaa la isku badalayaa halka kii hore hal curiye booskiisa laga badalayey. Qaabka aasaasiga ah ee falgalkana waa:
Falgalka u dhaxeeya sulfuric asiidh iyo soodiyom haydaroksaydh, si ay u sameeyaan soodiyom salfayt iyo biyo. Falgalkaas oo tusaale u ah falgalka labo boos iskubadalida kiimikeed:
Falgalka kiimikeed ee gubashada:
Falgalkan gubashada waxa uu dhacaa marka kiimikaalada kala duwan, siiba haydarokoorbonadu ay falgal lasameeyaan oksijiinta. Hadii haydarokaarboon uu yahay falgale, maxsuulku waa kaarboon labo oksaydh iyo biyo, falgalkaas dhacayana waxa uu bixinayaa kul. Sida ugu fudud ee loo habeeyo falgalka gubashada waa in loo qaato oksijiin dhinaca falgalayaasha ee is le’egta kiimikeed. Qaabka aasaasiga ah ee falgal kiimikeedka gubashadu waa:
Hydrocarbons+ O2 —> CO2 +H2O
Tusaale waxaa noogu filan gubashada methane:
Tags: Falgalada Kiimikeed ee Sahlan
Next post Maxaad ka Taqanaa Madaahibta Afarta Ee Laga Qaato Fahanka Diinta.
Previous post Milanada Kiimikeed